iTunes - iPhone News | Vaovao IPhone
iTunes Izany dia fampiharana ho an'ny Windows na Mac izay mamela mitendry ny mozikantsika na fisie horonan-tsary (sarimihetsika, andian-tsary sns). Mamela antsika koa io mividy mozika, sarimihetsika na rindranasa ho an'ny iPhone sy iPad. Ho fanampin'izay, iTunes no fitaovana miaraka aminy ampifanaraho ireo fitaovana iOS anay miaraka amin'ny solosaina, mamonjy ny fampahalalana rehetra ilaina amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny data. Azonao atao ny mahita ny vaovao rehetra avy amin'ny iTunes eto, kinova vaovao, mifanentana, sns.
Fampiharana Apple vaovao ho an'ny Windows 10 no hanomboka amin'ity taona ity
ny Ignatius Room hace 2 taona .
Tamin'ny fanombohan'ny macOS Catalina, nesorin'i Apple ny làlan'ny iTunes rehetra, ilay fampiharana izay rehetra ...
Apple dia hifantoka amin'ny Windows hanangana rindranasa vaovao
ny Ignatius Room hace 3 taona .
Apple dia mitady injenieran'ny rindrambaiko hamorona rindranasa ho an'ny Windows, farafaharatsiny izay no azo tsoahina amin'ny ...
Ny faharefoana ao amin'ny iTunes sy iCloud ho an'ny Windows dia mamela ny solosaina halefa an-keriny
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny fanafihana ransomware dia nanjary aretin'andoha ho an'ireo orinasa lehibe, ary ...
Ny mozika ananantsika ao amin'ny iTunes dia ho hita ao amin'ny fampiharana Apple Music vaovao
Raha nandritra ny taona maro ianao namorona tranomboky mozika feno tamin'ny alàlan'ny iTunes, dia azo inoana fa ...
iTunes dia hitohy ho afaka amin'ny Windows
Ny alatsinainy lasa teo, tamin'ny hetsika fampisehoana ho an'ny iOS 13, wstchOS 6, macOS Catalina ary tvOS 13, nanamafy i Apple ...
Ny fahafatesan'ny iTunes manakaiky ny andro iray tamin'ny WWDC 2019
ny louis padilla hace 3 taona .
Akaiky dia akaiky ny fahafatesan'i iTunes, toy ny 24 ora monja ny faran'ny ...
iTunes dia hampisaraka ny asany amin'ny fampiharana isan-karazany
Apple dia tsy maniry antsika hanohy hampiasa iTunes raha tsy tena ilaina izany, toy ny famerenana, famerenana amin'ny laoniny ...
ITunes dia toa nanisa ny androny tamin'ny macOS
Raha misy ny fampiharana Apple izay manangona tsikera ratsy marimaritra iraisana dia tsy isalasalana fa iTunes izany. Ny fampiharana, misy amin'ny macOS sy ...
Discovering Shortcuts, ny boky voalohany amin'ny Shortcuts, azo alaina amin'ny iBooks sy Amazon [SWEEPSTAKES]
Ny hitsin-dàlana dia teo alohan'ny sy aorian'ny fampiasana Siri. Ny fanombohana miaraka amin'ny ...
Ny mpilalao Apple Music web dia mamela antsika hiditra ny angon-tsainay hihainoana ny mozikantsika
ny Ignatius Room hace 4 taona .
Hatramin'ny nanombohany ny volana Jona 2015, nahavita nahatratra 40 tapitrisa mahery ny serivisy mozika streaming ...
iTunes dia efa misy ao amin'ny Microsoft Store, herintaona taorian'ny nanambarana azy
Tsy ampy herintaona lasa izay, Apple sy Microsoft dia nanambara fa ny iTunes, ilay rindrambaiko mamela antsika hanao ...
Ahoana no hahitana ny IMEI an'ny iPhone
Aiza no itehirizan'ny iTunes ny rindrambaiko alaina avy amin'ny iPhone, iPad?
Ahoana ny fomba hamerenana ny tenimiafinao Apple ID
Ahoana ny fomba hitakiana ny volanao amin'ny iTunes